Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Magacabaay Todoba Degmo oo Cusub – WARSOOR
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Magacabaay Todoba Degmo oo Cusub
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta digreeto madaxweyne waxaa uu ku magacaabay Todobada degmo oo cusub oo hoos iman doonoa shan-gobol oo Somaliland ah.
Digreetadda Madaxweynaha oo uu ku saxeexan yahay afhayeenka Madaxtooyadda Somaliland Md. Cabdiraxmaan Sh. Cilmi Faahiye. Nuxurka digreetaddan ayaa u dhignayd sidan:
“Madaxweynuhu Wuxuu go’aansaday;
Ø In uu Balli-mataan u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Maroodi-jeex.
Ø In uu Geba-gebo u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Togdheer.
Ø In uu Faqayuub u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Togdheer.
Ø In uu Shaxda u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Xaysimo.
Ø In uu Wadaamagoo u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Saraar.
Ø In uu Adhi-cadeeye u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Sool.
Ø In uu Gumburaha u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Hawd.
Dastuurka Somaliland ayaa xaq u siinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland inuu magacaabi karo degmooyin iyo goboladda cusub, haddii loo baahdo, gobolka iyo degmaddu buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay.
Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro oo Goob Fagaare Ah Kala Hadlay Boqolaal Ka Mid Ah Shacabka Magaalada Ceerigaabo
Madaxweynaha Somaliland oo Safar Gaar ah Ugu Kicitimay dalka Turkiga